XOG: Waa Kuma Ninka Qirtay Inuu Kufsaday Caasha Ilyaas? - Jigjiga Online
HomeSomalidaXOG: Waa Kuma Ninka Qirtay Inuu Kufsaday Caasha Ilyaas?
XOG: Waa Kuma Ninka Qirtay Inuu Kufsaday Caasha Ilyaas?
Gaalkacayo (JigjigaOnline) – Garsooreyaasha maxkamadda sare ee Puntland ayaa maanta u fadhiista kiiska la xidhiidha kufsigii iyo dilkii loo geystay Caa’isha Ilyaas Aadan, hase ahaatee arrintii ayaa waji kale yeelatay markii uu maxkamadda horteeda nin ka qirtay inuu kufsigaas geystay.
Xukunkii ay horay maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadda racfaanka ku rideen raggii ku eedeysnaa falkaas ayaa laga qabay dood, balse waxaa maanta mar qura isbaddalay sida ay wax u socdeen.
Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame ayaa sheegay in uu ka qeyb qaatay kufsiga Caasho, hal marna uu “u galmooday”.
Sidoo kale wuxuu sheegay in falkaas ay kula jireen nin kale, oo aan wali gacanta lagu soo dhigin iyo mid maaxta maxkamadda lala geeyay.
Maxamed Xareed, oo ah xeer ilaaliye ku xigeenka guud ee Puntland ayaa BBC-da u sheegay in qirashada Cabdifataax ay isbaddal ku keentay kiiska.
“Maanta waxaa kiiska kusoo kordhay in Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame, oo ahaa xukumanaha koowaad uu qiraal ku noqday inuu Caasha kufsaday una tagay hal mar. horay waa loo sameeyay baaritaanno badan laakiin qofka bani’aadanka ah qalbigiisa waxa ku jira gacanta loogama soo saari haro, gacantana intaan afkiisa galino kama soo saari karno waxa ku jira, labadii maxkamadood ee hore wuu inkiray falka, tanna qiraal buu ku ahaa”, ayuu yiri Maxamed Xareed.
Eedeysanaha saddexaad oo isna maanta maxkaadda la hor geeyay ayaa sheegay inuusan wax lug ah ku lahayn falkii lagu kufsaday, laguna dilay Caa’isha.
Eedaysaneyaasha Kiiskii Caasha Ilyaas oo ciidamadu maxkamadda geynayaan
Qareennada u doodayay saddexda eedeysane ayaa soo dhaweeyay go’aanka uu Cabdifataax ku qirtay arrinta, inkastoo ay horay ugu doodayeen in eedda loo jeedinayay aysan waxba ka jirin.
Mustafe Maxamed Jaamac oo ka mid ah qareennada ayaa BBC-da u sheegay in dooddoodu ay ku saleysned sidii caddaalad sax ah loo heli lahaa.
“Waa Alle mahadiis, Caasho Ilaah ha u naxariisto, waa la helay xaqeedii, annagu awalba ma aannaan duudsiyeynin xaqeeda, laakiin waxaan kasoo horjeednay in la galo dulmi kale, oo dad aan waxba galabsanin dulmi intaas kasii badan lagu sameeyo”, ayuu yiri qareenka.
Kiiskan la xiriira kufsiga ayaa soo jitamayay ku dhawaad 6 bilood, iyadoo dhageysigii maxkamadda sare ee maanta uu ahaa kii ugu horreeyay ee noociisa ah.
Maalinta Isniinta ah ayaa dib la isugu soo laaban doonaa dacwaddan, sida ay garsooreyaashu sheegeen.
Caa’isha Ilyaas Aadan oo ahayd 12 jir ayaa falka kufsiga iyo dilka ah loogu geystay magaalada Gaalkacyo.
Go’aankii xukunka dilka ah loogu riday eedeysaneyaasha
Baadhitaankii dheecaannada raggii kufsaday ee dilay Caasha Ilyaas
Maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaal ayaa xukun dil ah ku ridday saddex nin oo ku eedaysan kiiskii Caasho Ilyaas Aadan oo ahayd inan yar oo lagu kufsaday laguna dilay magalada Galkacyo.
Maxkamadda racfaanka ayaa ku raacday go’aankii ay horay maxkamadda darada koowaad ee gobolka Nugaal ay 12-kii March ugu ridday saddexdan eedaysane.
Ragga la xukumay ayaa kala ah: Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame, Cabdisalaan Cabdiraxman Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah oo ay fulinayso dowladda Punland.
Qareenka u doodaya eedaysaneyaasha ayaa rafcaan u qaatay maxkamadda sare oo ayado go’aanka kama dambaysta ah ka gaari doonta kiiskan.
Maxkamadaynta raggan ayaa dhowr jeer oo hore dib u dhacday ayadoo qareennaddii u doodayey ay codsadeen in waqti dheeri ah la siiyo.
Kiiska gabadhaan yar ee kufsiga iyo dilka loo gaystay ayaa caro weyn ka dhaliyey magaalada Galkacyo iyo guud ahaan deegaanada Puntland.
Dhammaadkii bishii Febraayo ee sanadkan ayaa meydkeeda laga helay magaalada Galkacyo ka dib markii laga afduubay halkaasi.
Dadka deegaanka ayaa BBC-da u sheegay in meydkan gabadhan yar la soo dhigay meel aan ka fogeyn xaafaddooda.
Kufsiga loo geystay gabadhan yar ma ahan kii ugu horreeyay ee ka dhaca deegaanadaas oo waxaa ka horreeyay kufsi loo geystay gabdho kala duwan oo ka kala dhacay magaalooyinka Galdodgob, Galkacyo, Garowe, iyo Guriceel, inkastoo qaar ka mid ah xabsiga loo taxaabay, hase yeeshee waxaan la ogeen sababta ku qaadi karta dadka ka dambeeya falkan foosha xun.
Madaxweynaha DDS Oo Soo Bandhigay Ficillo Ceeb Ku Ah ONLF Oo Soo Badanaya
Wariyihii caanka ahaa ee BBC-da oo xubin ka noqday ‘guddiga doorashooyinka Puntland’